Aqoonyahan Idiris Shiikh Xuseen: “Dowladda Qatar xogogaal ayey u tahay qaraxyadii Bossaso” (dhegayso|daawo) – Radio Daljir
Luulyo 24, 2019 8:27 g 0
Aqoonyahan Idiris Shiikh Xuseen oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha bariga dhexe oo waraysi gaar ah siiyeey warbaahinta Daljir ayaa ka waraysanay warbixin uu qoray Wargeyska The New York Times, kaas oo uu caddayn uga dhegay wadahadal si sir ah loo duubay una dhexeeya lataliye Amiirka Qadar iyo Safiirka Qadar ee Soomaaliya, uuna lataliyaha Amiirku ku wargelinayo safiirka in saaxiibada Qadar ka danbeeyeen qaraxii 11 May 2019 laga fuliyey iridda maxkamadda Bossaso, ayna ku dhaawacmeen tiro dad ah. Qarraxa ayaa waxaa sheegtay ururka Daacish ee ISIS.
Isla ururka ISIS ayaa sidoo kale sheegtay dilkii Maareeye Paul oo ahaa mareeyahii Dekedda Bossaso oo ay maamusho shirkadda PO Ports, ahna shirkad hoostimaada DP World oo ah shirkad ay dowladda Imaaraadku leedahay, kana mid ah shirkadaha caalamka ugu waaweyn ee maamula dekedaha adduunka.
Kal hore waxa ay dowladda Qadar magangalyo siyaasadeed siisay Maxamed Siciid Atam. ATAM ayaa ahaa bud-dhigihii, soona noqday hoggaamiyihii ugu horreeyey ee ururka al-Shabaab, faraciisa buurleyda Golis, waxa uuna hadda degganyahay magaalada Dooxa ee caasimadda Qadar.
Idiris ayaa waraysiga Daljir ku sheegay in dowladda Qatar ay ku luglahayd abaabulka qaraxyo ka dhacay Bossaso, kuwaan oo ay uga danlahayd si loo dhaawaco xiriirka Imaraadka, loona joojiyo mashaariic dowladda Imaaraadku ay ka waddo Bosaaso, Puntland.
Dowladda Qadar iyo waliba dowladda Soomaaliya oo aan soo bandhigin wax caddeyn ah ayaa si wadajir ah u beeniyey ku luglahaanshaha qaraxyada Bossaso.
Aqoonyahan Idiris ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xirira xifaaltanka ka dhexeya Imaaradka iyo Dowladda Qatar oo qoraalka The New York Times uu baalasha hore ee warbaahinta caalamka beryahaan lagu soo bandhigay.